Simiswe nomphathi omkhulu isikhulu 'esijivaza amanesi' - Ilanga News
Home Izindaba Simiswe nomphathi omkhulu isikhulu ‘esijivaza amanesi’
Simiswe nomphathi omkhulu isikhulu ‘esijivaza amanesi’
UMnyango wezeMpilo ungena ezintangeni ukucacisa ngalolu daba
AMANESI asesibhedlela uMgeni Psychiatric, eHowick, ebhikisha, ekhala ngempatho engeyinhle athi ayithola kwesinye sezikhulu zesibhedlela okuthiwa sigxeka amasiko.
UNGENA ezintangeni uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal ekucaci-seni ngokumiswa ngele-dlule emsebenzini kwezi-khulu ezimbili zasesi-bhedlela uMgeni Psychi-atric, eHowick, emuva kokuba amanesi evale amasango, ekhala ngempatho engeyinhle yesinye sazo, esisola ngokuthi sigxeka namasiko abantu abamnya-ma, sibakhumulise neziphandla sithi nga-madimoni.
ILANGA langoLwesine olwedlule libike ngesinye sezikhulu zalesi sibhedlela ebesi-bhikishelwa ngamanesi nezisebenzi zemi-khakha ehlukene bephelezelwa wubuholi beNational, Education, Health and Allied Workers Union (Nehawu) esifundeni saseHa-rry Gwala, eMgungundlovu, be-thi bakhathele wukuphatha kabi izisebenzi kwalesi sikhulu.
Lesi sikhulu kuthiwa sigcine siphuma sinyenya, sesaba uku-bhekana nolaka lwamanesi ne-nyunyana yawo njengoba bebe-thi bafuna ukusibona siphume saphela emagcekeni esibhedlela.
ILANGA lithole ukuthi
umnyango ugcine umise emsebenzini nesikhulu esiphezulu salesi sibhedlela ngokuthalalisa singawubikeli ngezikhalo ze-zisebenzi nezifakwa ngubuholi beNehawu esifundeni kukha-lwa ngalesi sikhulu.
UNobhala weNehawu esifu-ndeni iHarry Gwala uMnu Mazwi Ngubane utshele ILANGA ngeledlule ukuthi bese ibami emphinjeni eyokuhlukunyezwa kwamalungu abo emsebenzini.
Uthe bakhathele wukudlala umacashelana noMnyango wezeMpilo esifundazweni ngoba kudala babewubikela ngokuziphatha kabi kwalesi sikhulu kodwa singathathelwa izinyathelo.
ILANGA lithole ngomthombo walo onga-phakathi kulesi sibhedlela ukuthi umnyango ugcine usimisile lesi sikhulu njengoba we-nza uphenyo lwanga-phakathi ngokuziphatha kwaso.
“Kubonakele ukuthi uma eqhubeka umphathi wethu kuningi okuzokonakala emsebenzini ngoba akekho obesamfuna emagcekeni asesibhedlela. Uyena ozifakela isigcwagcwa ngokuqhakambisa inkolo yakhe nalapho kungenasidingo khona njengalapha emsebenzini ngoba sonke size ngenhloso eyodwa, yokuzosebenza.
“Uzonele ngokuqhakambisa inkolo yakhe njengebaluleke yodwa, waze wagxeka nama-nesi ayizangoma ewabiza ngesidleke samadimoni,” kusho umthombo.
UMnu Ngubane ukuqinisekisile kwiLANGA ukumiswa kwalezi zikhulu emsebenzini wuMnyango wezeMpilo esifundazweni. Uthe bayajabula ukuthi ababekhala ngakho
umnyango ugcine ukubonile, wenza okuthile njengoba bewuthalalisa.
“Kuyasijabulisa ukumiswa kwalezi zikhulu ngoba bezibukela phansi ama-Afrika ngalokhu ebezikwenza. Lesi esinye simiselwe ukungaphathi ngendlela nokungasingathi izikhalo zezisebenzi njengoba besingazidlu-lisi ezinhlakeni ezifanele.
“Simi ngomumo ukufakaza uma kudingeka. Sifuna ukubona kwenziwa ubulungiswa kulolu daba ngoba lumqoka, lubukela pha-nsi intando yabantu yokukhonza lapho be-thanda khona namasiko abo. Siyafisa kuju-tshwe ngokushesha ezinye izikhulu ezizobamba ngoba lezi zikhundla ezingenamuntu zimqoka,” kusho uMnu Ngubane.
Okhulumela uMnyango wezeMpilo Kwa-Zulu-Natal uMnu Sibongiseni Mkhize, uthe umnyango wabo uyazihlonipha izisebenzi zawo kawukhulumi izindaba zangaphakathi esidlangaleni.
“Lezi zindaba zidingidwa esigcawini esifanele. Siwumnyango siyaxolisa ngokupha-zamiseka kokusebenza okujwayelekile kwe-sikhungo. Emuva kokuxazululwa kwesimo esike saba khona isikhashana isimo siphi-nde sabuyela kwesejwayelekile,” kusho uMnu Mkhize.
Previous articleIDowns ethubeni lesicoco
Next articleOwesifazane “uzilengise wafa” esesokeni